Filler - inona no ao amin'ny cosmetology? Fanosihosena ao amin'ny valanaretina nasolabia, amin'ny takolaka, eo ambany maso, ho an'ny molotra
Ny fanandramana miantoka ny fahanteran'ny hoditra dia tiana hanitsy amin'ny fiandohan'ny fisehoany. Ny mpanao hatsikana dia miantso ny famenoana sy olana hafa momba ny taona ny safidy tsara indrindra. Azo ampiasaina mandritra ny 25 sy 30 taona izy ireo, ny fitsaboana dia azo antoka sy tsy misy fanaintainana, ary ny vokany aorian'izany dia maharitra hatramin'ny 2 taona.
Inona avy ireo rakitra?
Ny fahatakarana ny dikan'io teny io dia hanampy ny fandikany amin'ny teny anglisy. Ny faka "feno" dia mameno, mameno. Ny valin'ny fanontaniana, inona no atao hoe filler, dia ato amin'ity fandikan-teny ity. Izy io dia famenoana manana fikolanana matevina, toy ny gel ary toy ny rafitra miorina mafy. Ny vatana dia mitazona ny endriny mandritra ny fotoana lava, tsy miparitaka. Ny famenoana biolojika dia mifanaraka tsara amin'ny vatan'olombelona. Miala tsikelikely izy ireo ary alaina amin'ny fomba voajanahary amin'ny alalan'ny lymphatique sy ny rafi-pitatitra.
Inona no atao hoe cosmetology?
Ireo toetra simika misy ireo zavatra ireo dia ampiasaina amin'ny sehatry ny hatsarana sy ny fanarenana. Ny fahafantarana ny fomba nandikana ny teny hoe "fillers" dia hoe mora ny mahatakatra ny zavatra ampiasaina. Ampidirina eo ambanin'ny hoditra ireo mpanenona ao amin'ny toerana misy ravina. Manampy amin'ny fananganana tohatra izy ireo, hanozongozona ny ketsa efa misy ary misoroka ny fisian'ireo vaovao.
Ao anatin'ny dingan'ny fandalinana izay atao amin'ny tarehy, ny fanatontosana ny haitao dia nahitana safidy maro hampiasana fitaovana. Raha ny "swam" oval, ny hoditra dia tsy sitrana ary very elasticité, ny fampidirana ireo zavatra voalaza ireo dia hanampy amin'ny famerenana indray ny endrika ivelany. Ny fanafody dia ampiasaina mba hanodinana ny tarehiny - manantona ireo taolam-paty, mampitombo ny mofomamy na manome azy ny endrika tiana, ny fitomboan'ny voa ao amin'ny molotra.
Fillers - karazana
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia mahazatra ny famenoana mifototra amin'ny zavatra iray ihany. Ny famonoana Hyaluronic no manana laza malaza indrindra, satria manome ny vokatra haingana, manana vidiny sarobidy, azo antoka ny fampiasana. Na dia miseho tampoka aza ny tsy fahampian'ny alikaola na ny fahasamihafana hafa, ny tsy fahafalian'ny vokatra, dia afaka manimba avy hatrany ny voka-dratsiny ianao. Ny antidote ho an'io asidika io dia enzyme manokana (hyaluronidase).
Ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny mpiasa dia tokony hiantefa amin'ny karazana filera hafa izay mora manolo ny hyaluron:
microspheres methacrylate polymethyl;
Filler - fampiharana amin'ny cosmetology
Ny fangorahana biolojika dia ampiasaina amin'ny tanjon'ny fanarenana ny hoditra sy ny fanitsiana ny ampahany tsirairay. Ny toerana fametrahana dia miankina amin'ny fandaharan'asa kosmetika, ny filler dia afaka miditra amin'ny faritra manaraka:
ny faritra manodidina ny maso;
Fanosihosena ao amin'ny valanaretina nasolabial
Ity no faritra tena mahazatra indrindra, satria miseho eo amin'ny toeran'ny hafa, ny tohatra avy amin'ny vavorona eo amin'ny kibon'ny vavany, dia manantitrantitra ny taonan'ilay vehivavy, mahatonga ny tarehy ho reraka sy malahelo. Ny fonosana hyaluronic no tena ampiasaina amin'ny vala nasolabial, toy ny fiarovana sy fiarovana tsara indrindra. Ny fototry ny fofona toy izany dia bakteria sy kakazo. Ny voajanahary voajanahary voajan-tena dia simba amin'ny alalan'ny fatorana ny molekiolany amin'ny rojom-bidy, izay miantoka ny fahamendrehan'ny vatana sy ny fakana aina.
Raha tsy mety ny antokom-pihetseham-batana, dia hanangona fitaovana hafa avy amin'ny fitaovana hafa ny mpitsabo. Amin'ny rivotra nasolabial, ny fangaro avy amin'ny kisoa sy ny collagen bovine, ny polymère artificial sy ny hydroxyapatite ny kalesy dia tsara. Ny famenoana lafo indrindra nefa mahomby amin'ny fiainana lava indrindra dia ny microspheres metacrylate metacrylate polymethyl. Ny vokatr'ilay fampidirana ranom-boasary ao amin'ny vala nasolabial dia hita ao amin'ny sary.
Fanoroana eo ambany maso
Ny famantarana ny fongana ny hoditra manodidina ny hodi-doko amin'ny ankamaroan'ny vehivavy dia hita fa efa 27-30 taona. Amin'izao fotoana izao, ny ranomandry nasolacrimal dia lasa malaza ary ny fahakiviana lalina dia miseho eo ambanin'ny maso na ny loto, ny fahamainana ary ny tambazotra marevaka misy ny taolana . Ny fanitsiana marina amin'ny alàlan'ny fameno dia manampy amin'ny fanesorana ireo olana voatanisa mandritra ny fotoana lava.
Ny fampidirana ny filler amin'ny faritra voavolavola dia sarotra ary saika mpiasan'ny jeweler, satria ny hoditra ao amin'io faritra io dia tena malefaka sy marefo. Mba hiadiana amin'ny famantarana ny fahanterana, ny hyaluronic ampiasaina fotsiny no ampiasaina manodidina ny maso, ny karazana sokajy toy izany dia tsy mety. Ny vokatry ny fandehan-javatra dia haharitra herintaona eo ho eo, ny valin'ny fanodikodinana dia aseho eto ambany ny sary etsy ambany.
Fanosihosena amin'ny takolaka
Ny ampahany nohavaozina dia vita miaraka amin'ny faritra hafa. Raha jerena ny fihenan-tsakafo, inona moa izany, ny cosmetologists dia nahita fomba iray fanitsiana ny tsy fanaraha-maso ny oval. Ny fampiasana filler amin'ny taolam-paty dia manome ireto vokatra tsara ireto:
onja eo akaikin'ny zorony ivelany;
fanalefahana ny ren'ny nasolacrimal;
fanatsarana ny rafitry ny tarehy, manome azy ho endrika tsara sy tsara;
fanafoanana ny takolaka marefo;
fanakorontanana ny kankana nasolobialika.
Ny fampidiran-tsofin-tsofin-tsavony ho eo amin'ny faritry ny taolam-paty dia miavaka amin'ny fiainana serivisy lava indrindra. Izany dia vokatry ny fikajiana endrika kely ao amin'io faritra io. Noho ny tsy fahampian'ny hafanam-po mahery vaika, toy ny akaikin'ny maso na ny vava dia mihena matetika ny tsimokaretina, ka dia mihalefaka tsikelikely izy ireo. Azo atao isaky ny 1-2 taona ny fepetra naverina averimberina. Ny vokatra hita maso dia hita taratra amin'ny sary.
Sakafo ho an'ny molotra
Ny vehivavy dia mampiasa ny serivisy voatonona voatokana voalohany amin'ny tanjona hampidirana ny habetsahana. Ny fampitomboana ny fametahana lipo dia fomba fanao mahomby sy azo antoka miaraka amin'ny vokatra maharitra (herintaona eo ho eo), fa ny fampisehoana dia azo entina hamahana olana hafa:
famongorana ny asymmetrisan'ny molotra;
fanatsarana ny marariny;
Famerenana amin'ny laoniny ny endriny, very amin'ny alàlan'ny fahanterana;
ny fitrandrahana lalina eo anatrehan'ny tsy fahampian-drano, ny fahamamoana ary ny fikolokoloana;
manangana ny zoron'ny vavany.
Fanasitranana - ny fihenan'ny fanafody
Mba hahazoana ny vokatra tadiavina dia zava-dehibe ny tsy mahita fotsiny ny manam-pahaizana manokana, fa koa ny mpamokatra avo lenta. Ilaina ny mividy solosaina maromaro azo antoka sy zaraina, izay ny fanamarihan'ny Birao misahana ny fikarakarana fikarakarana fikarakarana ara-pahasalamana ofisialy (FDA) nohamarinina. Ity no fikambanana mandrindra indrindra izay manara-maso ny fahombiazan'ny fiarovana sy ny fiarovana.
Ny famenoana tsara indrindra ho an'ny valala nasolabial - valiny:
Restylane, Belotelo (asid hyaluronic);
ArteFill (microspheres methylacrylate polymethyl);
Sary sokitra (asidra poly-L-lactic).
Ny fihenan'ny ranomason'ny maso (hyaluron fotsiny):
Radiesse (hydroxyapatit of calcium);
Sary sokitra (asidra poly-L-lactic);
Ellans (microspheres methylacrylate polymethyl).
Ny fantsona fingotra tsara indrindra - fanombanana (hyaluronic fotsiny ihany):
Filler - Pros and Cons
Ny tombontsoa lehibe amin'ity fomba fitsaboana ity dia fihenam-bidy haingana sy maharitra tsy misy fitsaboana chirurgie. Ny vinaingitra tsara indrindra dia manome valiny maharitra, izay azo itokisana amin'ny famerenana miverimberina isaky ny 6 hatramin'ny 15 volana. Miharatsy ny fikorontanana sy ny mararirary, manatsara ny fiheverana ny oval sy ny tarehimarika, ny fahalemen'ny asymmetrika sy ny toetr'andro hafa dia manalefaka.
Ny fatiantoka amin'ny fampidirana ny fitaovana dia ahitana ny zavatra toy izao:
ny tahan'ny fidiram-bola;
ny filàna fanitsiana tsy tapaka;
Ny fiantraikany mifanaraka amin'izany:
Famolavolana tsimokaretina ambanin'ny hoditra (miaraka amin'ny fampidirana tsy ara-dalàna ny fameno);
hematoma, fihenam-bidy ao amin'ny tranokala;
fanehoan-kevitra mahazatra amin'ny zava-mahadomelina amin'ny endriky ny fihenjanana sy ny fanolanana;
fampidirana ny ratra amin'ny ratra mivoha aorian'ny fanasaziana ny hoditra;
fananganana kesika manify, izay mila esorina amin'ny fanesoana;
ny fanodikodinam-pandrefesana amin'ny faritry ny fitantanana;
Ny fifindra-monin'ny fanafody amin'ny vatany manodidina sy ny hafa.
Fillers - fanoherana
Misy fepetra tsy maharitra sy maharitra, izay voarara ny fampidirana ireo mpanampy. Vondrona voalohany:
Aretina hoditra hafahafa;
famerenana ny aretina mitaiza;
Ny fampiharana vao haingana ny felana, ny famindrana laser ary ny fiantraikany hafa amin'ny hoditra;
mitondra fanafody sasany
Tsy azo ampiasaina amin'ny tranga toy izany ny fanafody amin'ny tarehy:
fanitsakitsahana ny dingan'ny fiterahana ra;
fananganana toeram-pitsaboana hertreprophic sy keloid;
tsy fahombiazan'ny kidoro;
fanehoan-kevitra mahery vaika mafy.
Ny ankamaroan'ny mpanamboatra mpanamboatra dia manomboka mamoaka vola izay mampanantena ny vokatra mitovy amin'ny fitsaboana nodinihina, saingy tsy mila ny fisidinana. Diniho ny fahombiazan'izy ireo raha toa ianao ka mianatra amin'ny tsipika mofomamy amin'ny endriny - inona no itiavana azy. Ny firafetan'ireny menaka ireny dia ahitana ny derivatives amin'ny asidra hyaluronic, na collagen. Mampiroborobo ny hoditra maharitra ela izy ireo, saingy tsy manatanteraka ny asan'ny bakteria biolojika.
Ny kôlagena na hyaluronic crème-filler dia tsy miditra ao amin'ny faritra lalina eo amin'ny tavy, tsy mitoetra afa-tsy eo amin'ny tampon'ny epidermis. Ny fitsaboana toy izany dia manatsara ny toe-pahasalamana, nefa aza miady amin'ny mariky ny fahanterana. Marika malaza:
Amore Lipofiling (amin'ny hoditra manodidina ny maso);
Filorga fotoana filler;
Histomer Vital Bio sy ny hafa.
Inona no hosasana amin'ny vavanao?
Manga amin'ny teboka mainty
Heparina menaka ho an'ny karandohany
Fotsy fotsy eo ambanin'ny masony
Kaomandy ho an'ny bitro
Supermodel Heidi Klum dia nahagaga ny endrika marevaka amin'ny dokambarotr'ilay dokambarotra
Kitapom-bidy ho an'ny trano
Sakafo sandoka misy paoma
Voatofa ao amin'ny oven
Kandida Genita - Antony, Symptoms, Treatment of Disease
Sakafo miaraka amin'ny buckwheat
Ny fihinanana proteinina-legioma
Trano vita amin'ny hazo
Jiromamy mody - spring-summer 2015
Leonardo DiCaprio nandany ny faran'ny herinandro niaraka tamin'ny vehivavy marevaka volo
Sary eo am-pandriana eo ambonin'ny fandriana